Dagaal lagu le’day oo ka socda degaano ka tirsan Galmudug iyo xaaladda oo kacsan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Faahfaahino dheeriya ayaa ka soo baxaya Dagaal goor dhawayd ka bilowday duleedka Magaalada Bacaadweyne ee Koonfurta Gobolka Mudug, waxaana dagaalkan uu u dhaxeeya dadka deegaanka, Ciidamada Galmudug iyo Mililteriga Dowlada oo isku dhinac ah iyo Al-Shabaab.
Dagaalkaan ayaa yimid kadib markii dhowr hoobiye lagu tuuray magaalada Bacadweyne afafkeeda hore, waxaase madaafiicdaas ku baxay Ciidamada halkaasi ku sugnaa, iyagoona dagaal la galay Xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab, sidoo kale dadka degaanka ayaa dagaalka ku biiray.
Ilo ku sugan Degmada Bacaadweyne ayaa inoo sheegey in hadda uu dagaalku ka socdo meel aan sidaasi uga dheerayn degaanka Camaara, isla markaana ay Ciidamadu baacsadeen kooxdii weerarka soo qaaday.
Wararka ayaa intaaa waxaa ay kusii darayaan in dagaalka uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyada soo kala gaaray, waxaana la sheegayaan in la laayay dad shacab ah.
Magaalada Bacaadweyne waxaa ku sugan Wafdi uu hoggaaminayo Sanetor Cabdi qeybdiid, Xubno ka tirsan Baarlamaanka Galmudug iyo Saraakiil Ciidan oo kala socda Galmudug iyo Federalka Soomaaliya.
DAAWO SAWIRRO:-RW Rooble oo booqday Xarunta Xannaanada Caruurta